MANANA FITAHIANA IZAY AO AMIN’I JESOSY – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 avril 4, 2014 Laisser un commentaire sur MANANA FITAHIANA IZAY AO AMIN’I JESOSY
« Voatahy samy vehivavy ianao, ary voatahy ny hateraky ny kibonao » (Lioka 1:42b)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny Anaran’ny Tompo, mbola afaka mifanerasera amin’ny alalan’ny teniny. Amin’izany dia hita fa manana fitahiana manokana mihoatra lavitra noho izay eritreretintsika isika. Tsy ho ao amintsika anefa izany raha tsy Ilay Andriamanitra be fitiavana manana amby ampy amin’izany no anankinantsika ny finoantsika. Tsarovy tsara, fa samy nizaràn’Andriamanitra izany fitahiana lehibe izany avokoa ny zanak’olombelona rehetra, saingy izay tsy mino an’i Jesosy ho tompony dia tsy mety mahita fiadanana mihintsy. Izay mino ny Zanaka kosa anefa hoy ny tenin’Andriamanitra no manana fiainana (Jaona 3:36a).
Inona ary ny Fitahiana?
Andeha horaisintsika ny tenin’Andriamanitra izay naroso tetsy ambony hoe: « Voatahy samy vehivavy ianao, ary voatahy ny hateraky ny kibonao » (Lioka 1:42b). Teo amin’ny tantara nifamangian’i Maria sy Elizabeta ao amin’ny Lioka Toko 1 no nisintonana izany. Andaniny, Elizabeta dia vadin’i Zakaria mpisorona. Mandra-pahatongan’ny fahanterany dia tsy nanana zanaka nateraka izy ireo. Tamin’ny andro iray izay nanatanterahany ny raharaham-pisoronana teo anatrehan’Andriamanitra anefa dia nirahin’Andriamanitra ho eo aminy ny Anjely hilaza aminy hoe: « Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no hataonao anarany » (Lioka 1:13b) (Io ilay Jaona mpanao batisa). Nanampo ve i Zakaria sy Elizabeta fa mbola hanan-janaka amin’izato fahanterany? Ankilany kosa, Josefa sy Maria: mbola tsy mpivady fa mpifamofo. Nanaja ny fifankatiavany noho ny amin’ny didin’Andriamanitra izy ireo. Tonga teo aminy ihany koa ny anjelin’Andriamanitra nilaza hoe: « Ary, indro hitoe-jaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hatao hoe: Jesosy. » (Lioka 1:31). Raha izany, ny FITAHIANA dia tsy inona akory fa AINA izay omen’Andriamanitra amin’ny fotoanany avy. Tsy izany ve no vokatry ny fiterahana? Mahazo aina vaovao ny olona. Voatahy izy. Andao atao hoe: misy aina vaovao avy ao aminy. Noho ny amin’i Jesosy zanak’Andriamanitra velona dia ao amin’i Maria no anataterahana ny fitahiana ho an’ny olombelona rehetra. Tsy tsapan’ny Elizabeta ho efa tanteraka taminy anefa ilay hoe: « voatahy » ka heveriny ho i Maria ihany no manana izany. Ny marina anefa, tsy diso anjara i Elisabeta. Marina tokoa fa na ny vola, na ny harena, na ny fahasalamana, na ny zavatra maro ny amin’izao fiainana izao izay ivelomantsika dia fitahiana avy amin’Andriamanitra avokoa. Satria miantoka ny fahavelomantsika avokoa ireny. Na izany aza anefa dia hoy ny tenin’Andriamanitra: « Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: Ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho an’iza izay zavatra noharinao? » (Lioka 12:20). Ny fitahiana izay heverintsika mandrakariva dia ilay mora rava. Ny tena fitahiana dia JESOSY tenany. Amin’izany dia MANANA FITAHIANA IZAY AO AMIN’I JESOSY
Ry havana malala ao amin’ny Tompo, Ny aina izay natolotry Jesosy ho anao teo ambony hazo fijaliana no fara-tampony amin’ny fitahiana omen’Andriamanitra ho anao. Maimaimpoana izany, tsy sandaina vola aman-karena, ary tsy misy sarany. Velona Izy ary nitsangana tamin’ny maty mba anehoany aminao fa misy aina maharitra mandrakizay ao aminy. Zarainy aminao io aina io mba hanananao fahavelomana mandrakizay miaraka aminy koa. Ary raha milaza ny tenin’Andriamanitra fa «voatahy ny hateraky ny kibonao»: dia satria, tsarovy fa tsy ho anao irery; fa lovain’ny taranaka fara-mandimbinao ny fitahiana vitany indray mandeha teo ambony hazo fijaliana. Ny fahafatesany no mampanana fitahiana ny mino rehetra. Rehefa manan-danja aminao ny fahafatesany dia tonga miredareda ao am-ponao ny fahavelomany. Hoy Izy amintsika: « Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha tsy latsaka ao amin’ny tany ny voam-bary ka maty, dia mitoetra foana izy; fa raha maty kosa izy, dia hahavokatra be. » (Jaona 12:24).
Publié parfilazantsaramada avril 4, 2014 Publié dansUncategorized